प्रकाशित मिति: 2020/03/15
चैत्र २, काठमाण्डौ । नेपाली पर्यटन बजारमा प्रकाशचन्द्र लोहनी पर्वतिय रेस्क्यूका क्षेत्रमा परिचित छन । यसका साथै उनी सफल होटल व्यावसायी समेत हुन । राजधानी ठमेलमा मात्रै केन्द्रित पर्यटन बजारलाई नेपाली प्राकृतिक भूगोलसँग जोड्दै उनी काभ्रेको बल्थली सम्म पुगे । अग्ला पर्वतिय श्रृंखलाको चुचुरो ‘वन द टप अफ दी पीकमा’ बल्थली ईको हिल रिर्सोट स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुमाझ प्रशिद्ध छ । सन २०१५ को सुरुवाती दिनमा स्थापना भएको रिर्सोट भुकम्प, नाकाबन्दी र बर्तमान फरक परिस्थीतिका बिच आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई मनोरम दृश्यका स्वादिष्ट खाना र आवासको सुबिधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
पर्वतिय क्षेत्रमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठमेल नयाँबजारमा ‘अल्पाईन रेस्क्यू सर्भिस’ मार्फत लोहनीले सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छन । पर्वतिय रेस्क्यूका क्षेत्रमा उनको संस्थाले अग्रणी भुमिका खेल्दै आएको छ ।
बि.स. २०३४ सालमा नुवाकोटमा जन्मिएका हुन प्रकाशचन्द्र लोहनी । स्थानिय श्री शक्ती माबिबाट एसएलसी दिएपश्चात २०५० सालमा उनी काठमाण्डौ प्रवेश गरेका हुन । सरस्वती क्याम्पसबाट स्नातक गरेका उनी सुरुवाती दिनमा नेपाल ट्राभल एजेन्सी मार्फत पर्यटनमा प्रवेश गरेका हुन । सन २००८ मा पर्वतीय रेस्क्यूका क्षेत्रमा काम गर्न ‘शुभतारा चार्टड कम्पनी’ उनको पहिलो निजी कम्पनी रहेको थियो । हाल अल्पाईन रेस्क्यू सर्भिस, बल्थली ईको हिल रिर्सोट लगायत दर्जनौ संस्थामा उनी क्रियाशिल रहँदै आएका छन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनीसँगको कुराकानी ।
पर्यटनमै क्रियाशिल छु । समाजसेवा अर्को पाटो हो । कोरोनाका कारण पर्यटन व्यावसाय सुस्ताएको छ, हिसाबकिताबका जोडघटाउ पनि चलिराखेकै छ ।
२. ठमेलमा रेस्क्यू सर्भिस र होटल चलाईराखेको व्यक्ति बल्थलीको चुचुरोमा होटल खोल्न पुग्नुभयो, किन ?
नेपाल प्राकृतिक रुपमा सुन्दर छ । ठमेल आउने पर्यटकहरुलाई नजिकै अर्को डेस्टीनेशन नहुँदा उनीहरुको बसाई लम्बाउन सकिदैन । यस्तोमा नेपालको प्राकृतिक भुगोलसँग पर्यटकलाई परिचित गराउन र भिन्न शैलीमा काम गर्ने चाहनाका लागि पनि बल्थली रोजेको हुँ ।
३. व्यावसायिकताका दृष्टिले चुचुरोमा खोलिएको होटलले कत्तिको साथ दिने रहेछ ?
सन २०१५ को सुरुकै महिनामा रिर्सोट सुरु भएको थियो । लगत्तै भुकम्प गयो । त्यसयता पर्यटनमा देखिएका बिभिन्न खाले संकट र बल्थलीको परिचयमै समय खर्च भयो । यद्यपी अहिले धेरै स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुलाई रिर्सोटबारे जानकारी छ । उनीहरु पुगेकै छन । यसअर्थमा व्यावसायिकताको बाटो पहिल्याउने नै छ ।
४. पर्यटन प्रवद्र्धनको स्थीति चै के छ ?
अहिले कोरोनाका कारण सुरक्षित रहने कुरा नै प्रमूख हो । तत्कालका लागि अहिलेको संकट समाधान नभएसम्म प्रवद्र्धनका कुराहरुको कुनै अर्थ छैन । पर्ख र हेरको स्थीतिमा छौ ।